Cross-Domain Canonicals များသည် International အတွက်မဟုတ်ပါ Martech Zone
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည် ရှုပ်ထွေးသောဘာသာရပ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာအကြံဥာဏ်တွေအများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကြားတဲ့အရာတိုင်းကိုအကောင်အထည်မဖော်သင့်ဘူး။ အွန်လိုင်းမှာသင်ရှာနေသောအချက်အလက်များကိုအချိန်ယူပြီးစစ်ဆေးပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး က၎င်းကိုရေးသားခဲ့စဉ်က၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အချက်အမှု၌, HubSpot အသစ်တစ်ခုကို ebook ထုတ်ဝေခဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် SEO နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များ။ ကျွန်တော်တို့ဟာပရိသတ်တွေပါ HubSpot ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်တရားဝင်ဖြစ်သည် Hubspot အေဂျင်စီ။ သို့သော်ယခုမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော ebook တွင် SEO များကို၎င်းတို့၏နိုင်ငံတကာကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရာတွင်အခက်အခဲများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလူမှုကွန်ရက်များမှတဆင့်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးဂူဂဲလ်ကိုးကားချက်တွေကိုပေးတယ် - ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတည့်မတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တုန့်ပြန်မှုအတော်များများမရခဲ့ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူများအားသတိပေးရန်ဤ post ကိုရေးသားနေခြင်းဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SEO အကြံပေးချက်
top-level domain တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ HubSpot အသုံးပြုရန်အကြံပြုခဲ့သည် ဒိုမိန်း canonical tag ကိုကူး သင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာများတစ်ခုချင်းစီကိုသင်၏အဓိကကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ပြန်ပို့ရန်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်မဟုတ်သောကြောင့်သင်၏ SEO အားထုတ်မှုကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ The rel = "canonical" tag ကို ရန်အသုံးပြုသည် ထပ်အကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများဖယ်ရှားပစ် ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေ။ ၎င်းသည် Google အား၎င်းကို SERP တွင်ဖော်ပြရန်နှင့်သင်လိုချင်သောအလွန်ဆင်တူသောအကြောင်းအရာများပါသောစာမျက်နှာများစုစည်းထားသည့်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗားရှင်းကိုဂူဂဲလ်အားပြောပြရန်အသုံးပြုသည်။ ထပ်မံပါဝင်သောအကြောင်းအရာများအတွက်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအခါအားလျော်စွာ canonical tags များကိုအသုံးမပြုပါဟု SEO ကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပေးသည်။
ဒါကအစွန်အဖျားပါပဲ HubSpot ထောက်ပံ့ပေး:
Cross-Domain Canonicals များသည်ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ
ကျွန်တော့်ရဲ့နိုင်ငံတကာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက် gTLDs ၃ ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ - mysite.com, mysite.co.ukနှင့် mysite.de။ mysite.com နှင့် mysite.co.uk တွင်အလားတူအကြောင်းအရာများရှိသည်။ mysite.de တွင်တူညီသောအကြောင်းအရာရှိသော်လည်းဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်ရှိသည်။
ebook ပြောတာကိုအကောင်အထည်ဖော်ကြပါစို့ အကြှနျုပျ၏အဓိက site ကို mysite.com ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ mysite.com အဖြစ် .co.uk နှင့် .de domains များထဲတွင် canonical link ကိုထည့်တော့မည်။ Googlebot သည်ကျွန်ုပ်၏ .co.uk ဒိုမိန်းသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည် canonical link tag ကို လိုက်၍၊ .com domain ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ငါဒါလုပ်မယ် ဂူဂဲလ်ဘယ်တော့မှအညွှန်းဘယ်တော့မှမ ငါ့ .co.uk နှင့် .de domains များနှင့်ဤစာမျက်နှာများလိမ့်မည် ဘယ်တော့မှမပေါ်လာဘူး ဒေသဆိုင်ရာ Google ရှာဖွေမှုများတွင် ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာဒိုမိန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ခဲ့သောအခွင့်အာဏာအားလုံးကို .com site သို့ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မည်။
ဒေသဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုပါကနိုင်ငံအဆင့်ကုဒ်နံပါတ် TLD တစ်ခုစီအတွက်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်ဆိုပါက canonical tags များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ Google ကိုတကယ် ဒီမေးခွန်းကိုဖြေတယ် သူတို့ရဲ့အကူအညီအတွက် Webmaster Central ဖိုရမ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Anju Mohan) ။ သင်၏ multiregional ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုဂူဂဲလ်မှရည်ညွှန်းလိုလျှင် Google သည်“ canonical tag” ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ Google ကပြောပါတယ် rel = "အခြား" hreflang = "x" အစား tag ။
အဆိုပါ rel = "အခြား" hreflang = "x" ဂူးဂဲလ်ကအထူးသဖြင့်ဘာသာပေါင်းစုံနှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံသောနိုင်ငံတကာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Google ကသင်၏ဒေသဆိုင်ရာ site ၏မှန်ကန်သော version ကိုရှာဖွေသူများအတွက်ပြသရန်ကူညီသည်။ အပေါ်ကမြင်ကွင်းမှာ hreflang tag ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်။
ဒီအစုကိုဒေသဆိုင်ရာစာမျက်နှာများတစ်ခုစီ၏ခေါင်းစဉ်ထဲသို့ထည့်ပြီးသတိရပါ ကွမ်းခြံကုန်း tag သည်စာမျက်နှာအတွက်သီးခြားဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Google UK တွင်ရှာဖွေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မှန်ကန်သောဘာသာစကားဗားရှင်းကို mysite.co.uk ပြလိမ့်မည်။
Tags: Cross- ဒိုမိန်းCross- ဒိုမိန်း Canonicalကွမ်းခြံကုန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ seointernationalization ရ
အခြေအနေတွင် Native Advertising
ဒီဇင်ဘာ 14, 2012 မှာ 12: 52 AM
သင် ၁၀၀% မှန်ပါတယ် ဒီကိစ္စကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပဲငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ကောင်းသောဖမ်း!
ဒီဇင်ဘာ 14, 2012 မှာ 5: 10 AM
ဒီဇင်ဘာ 14, 2012 မှာ 6: 13 AM
ကောင်းတယ် မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မကြာမီဤအရာကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 17, 2012 မှာ 2: 29 AM
nikki သွားကြဖို့လမ်း !! rel = "အခြား" hreflang = "x" သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အချက်အလက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2012 မှာ 5: 20 AM
ဘာလို့“ ဂူဂဲလ်ကနိုင်ငံခြားဘာသာပြန်ခြင်းကိုမိတ္တူပွားခြင်းလို့မသတ်မှတ်ဘူး” ဆိုရင် hreflang tag ကိုသုံးသင့်တယ်
ဒီဇင်ဘာ 19, 2012 မှာ 6: 14 AM
သင့်တွင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဗားရှင်းရှိသည့်ဒိုမိန်းခွဲခွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား gTLD တစ်ခုရှိပါကထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာများမရှိသောကြောင့်ဤအညွှန်းကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများနှင့်အတူဘာသာစကားတစ်ခုတည်းတွင်အလားတူအကြောင်းအရာများရှိပါကဤ tag သည်ဥပမာအသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအမေရိကန်နှင့်ယူကေရှိစာဖတ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပါဝင်သည်။ ဂူဂဲလ်ကိုရှာဖွေသူများအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဖော်ပြရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗားရှင်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏ယူကေဖြစ်သည်ဟုဂူဂဲလ်ကိုပြောရန်ဤ tag ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2012 မှာ 8: 34 AM